Sidee loo qaybiyaa heerka biyuhu ee IP65? Ka waran heerka IP65 ee aan biyuhu ilaalin ee nalalka qorraxda?
Iftiinka wadada cadceeda
Iftiinka beerta qorraxda
Iftiinka darbiga qorraxda
Iftiiminta Qorraxda Qorraxda
Iftiinka Aagga Qorraxda
Beerta & Beerta
Aagga macdanta & Saxaraha
Lakeside & badda
Bar muuqaal ah
Ka waran heerka IP65 ee aan biyuhu ilaalin ee nalalka qorraxda? Sidee loo qaybiyaa heerka biyuhu ee IP65?
Ka waran heerka IP65 ee aan biyuhu ilaalin ee nalalka qorraxda?
Nalalka cadceedda ee dibadda ayaa la dhigaa bannaanka sanadka oo dhan, si aan looga fursaneynna waxay ku dhacaan nabaad guurka dabaysha iyo roobka. Si kastaba ha ahaatee, iftiinka waddada qorraxda ayaa leh wareeg. Marka xariiqdu soo gasho biyaha, waxay keeni kartaa wareeg gaaban oo iftiinka waddada ah. Taasina waxay keentaa daadad ama iftiin la'aan iyo dhibaatooyin kale. Sidaa darteed, nalalka cadceeddu waa inay noqdaan kuwo aan biyuhu lahayn.
IP65 IP waa soo gaabinta Ilaalinta Ingress, iyo heerka IP waa heerka ilaalinta ee qalabka korantada ee kuxiran ee ka dhanka ah faragelinta walxaha shisheeye.
Inta badan nalalka cadceedda ayaa hadda lagu qiimeeyay IP65, kaas oo markii horeba ahaa mid aad u sarreeya.
Heerka boodhka IP65 wuxuu si buuxda uga hortagayaa inuu boodhka soo galo, heerka biyuhuna waa in diyaaradaha cadaadiska hooseeya ee xagal kasta aysan wax saameyn ah ku yeelan.
Sidee loo qaybiyaa heerka biyuhu ee IP65?
Darajada boodhka celiya (IPXX X kowaad ayaa tilmaamaysa)
0: ilaalin la'aan
1: In laga hortago soo dhex galka adkaha waaweyn
2: Ka hortag soo dhex galka adkaha dhexdhexaadka ah
3: Ka ilaali soo dhex galka adkaha yar yar
4: Ka ilaali waxyaalaha adag ee ka weyn 1mm inay soo galaan
5: Ka hortag ururinta wasakhda waxyeelada leh
6: Gebi ahaanba ka ilaali siigada inay soo gasho
Darajada biyuhu-ilaalinta (IPXX labaad X ayaa tilmaamaysa)
1: Dhibcaha biyaha ee qolofta ku daadanaya wax saamayn ah kuma laha
2: Biyaha ama biyaha roobka ee ka soo daadanaya 15 darajo qolof ma laha wax saameyn ah
3: Biyaha ama biyaha roobka ee ka soo daadanaya xagal 60-degree ah ilaa qolofka wax saameyn ah kuma laha
4: Biyaha oo ku firdhiya xagal kasta wax saamayn ah kuma laha
5: Duritaan hoose oo xagal ah wax saameyn ah kuma laha
6: Biyaha jet-ka-cadaadiska ah wax saameyn ah kuma laha
7: Waxay u adkeysan kartaa immersion biyaha waqti gaaban (15cm-1m, nus saac gudahood)
8: Ku qooy biyo muddo dheer cadaadis gaar ah
Qiimaynta iska caabinta biyaha ee alaabta Sresky
Alaabooyinka Sresky waxay leeyihiin qiimaynta biyuhu IP65 waxayna mareen boodhka iyo tijaabada biyaha adag.
Dhammaan jirka aluminium ee leh Anti-oxidation iyo tignoolajiyada ka-hortagga daxalka waxay si wax ku ool ah uga hortagi karaan boodhka, biyaha iyo daxalka. Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa meelo kala duwan oo dibadda ah. Sida harooyinka, badaha iyo miinooyinka.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto nalalka cadceedda, fadlan xor u noqo inaad nala soo xidhiidho
2020 shahaadada ISO
Nalalka gidaarka cadceedda ee ugu iibinta fiican ee dhammaan goobaha
10ka ugu sarreeya ee iibinta nalalka waddada cadceedda ee dhammaan goobaha
Dhammaan waxa ugu wanagsan hal nal cadceedda, soo saaraha sare ee Shiinaha
← Post Previous
Post Next →
Halkan ku qor ..
360° VR Bandhiga Hoolka
20ka ugu wanaagsan ee soosaarayaasha iftiinka wadada cadceedda
7-da nalalka cadceeda ee ugu fiican dib u eegista
18-ka ugu wanaagsan ee soo saaraha beerta iftiinka qorraxda ee Shiinaha ee Alibaba
6-da nalalka cadceedda ee dibadda ee casriga ah ee ugu wanaagsan
Nalalka beerta cadceedda 7 ee ugu fiican 2021 Dib u eegista
10ka ugu fiican ee nalalka gidaarka cadceedda dib u eegis
45° xagal lagu hagaajin karo iftiinka darbiga qoraxda
Laydhka cadceedda oo leh guddi weyn oo LED ah oo loogu talagalay aagga iftiinka ballaadhan
Shaqooyin badan oo adeegsi model Light Wall Light
Kontoroolka fog iyo qaabka nalka PIR nalka wadada qoraxda
Basalt taxane SSL-912 isku-dhafan nalka waddada qorraxda
Waxa ugu fiican oo dhan hal nal cadceedda Model
Iftiin caqli badan
Tag Raadinta Sare
Dhammaan-in-hal nalalka waddooyinka qorraxda dhamaantood waxay ku yaalaan hal nalka cadceeda dhamaantood waxay ku jiraan hal shirkad oo nalalka cadceedda dhamaantood waxay ku yaalaan hal warshad nalka cadceeda nalalka derbiga qorraxda ugu fiican china mugdiga cirka u hogaansan nalalka wadooyinka soosaarayaasha iftiinka muuqaalka Shiinaha nalalka muuqaalka leh ee iftiinka qoraxda ee Shiinaha cadceedda ganacsi iftiinka muuqaalka qorraxda ee ganacsiga fiidkii ilaa waaberi nalalka cadceedda halo isku dhafka iftiinka waddada qorraxda ip65 aan biyuhu ahayn nalalka horseeday LEDs nalalka cadceedda maqribkii xakamaynta iftiinka qalabka dhaqdhaqaaqa xarkaha fuulo nalka banaanka iftiinka beerta qoraxda dibadda Review iftiinka derbiga qorraxda ee dibadda Review la dhigto iftiin xoog leh kontoroolka fog nalka amniga Iftiinka Aagga Qorraxda nalalka daadka cadceedda Iftiinka beerta qorraxda nalalka beerta qorraxda Soo saare iftiinka beerta qorraxda Iftiiminta Qorraxda Qorraxda iftiinka muuqaalka qorraxda nalalka muuqaalka qoraxda Iftiinka Dayaxa guddiga qoraxda Ledh ku shaqeeya cadceedda wadada tamarta cadceedda nalka cadceedda shirkadda cadceedda waddooyinka soo-saareyaasha iftiinka waddada qorraxda Nalalka waddooyinka ee qoraxda Qiimaha laydhka cadceedda Iftiinka Darbiga Qorraxda nalalka cadceedda
Ganacsi oo dhan ku jira hal iftiin cadceedda
10ka nalal ee caanka ah ee qorraxda ee Amazon
Nalalka beerta qoraxda ma u baahan yihiin qorrax toos ah? Iyo sida ay u iftiiman tahay iftiinka jidka beerta qorraxda ee bannaanka u baahan yahay inuu noqdo?
Sida loo dayactiro nalalka beerta ku shaqeeya qoraxda?
10-ka Iibka ugu Wanaagsan ee Amazon String Beerta Laydhka
Sida loo beddelo baytariyada nalalka beerta qorraxda?
Waa maxay nooca baytariyada loogu talagalay nalalka beerta qorraxda?Maxay ku kala duwan yihiin baytariyada kale?
Shenzhen Sresky Co., Ltd waxaa la aasaasay 2004. Waxaan diiradda saarnay horumarinta iyo wax soo saarka ee alaabta qorraxda in ka badan 17 sano.
Qorraxda casriga ah waxay wanaajisaa mustaqbalka. Nolosha mustaqbalka ha ahaato mid wanaagsan. Ilaalinta deegaanka iyo horumarka waara. Si ay u noqdaan astaanta iftiinka qorraxda ee adduunka.
Address: Dhisidda warshadaha JingMei, Baoan, Shenzhen, Shiinaha
Naga soo wac: 86-18123675349
Isniin - Jimce: 9: 00 AM - 6: 00 PM
Xuquuqda daabacaadda © 2022 Sresky
Waxaa xoojiya Sresky